Inona avy ireo antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny tany | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | | Haitoetrandro
Ny taonjato faha-XNUMX dia ny taonjato izay ananan'ny fiovan'ny toetr'andro satria tonga ny fiakaran'ny maripana fandrahonana roa tena izy ho an'ny planeta iray manontolo. Raha toa ka fihafanan'ny tany, mitovy dia vokatry ny FANDROSOANA mari-pana antonony ny ranomasina sy ny habakabaka noho ny antony voajanahary ary indrindra vokatry ny fihetsiky ny olombelona.
ny mpahay siansa sy manam-pahaizana Any an-tsaha dia nandany am-polony taona maro nandinihana an'io tranga io izy ireo ary nanandrana namina ny fiovana izay nateraky ny fiakarana hiteraka eran-tany afaka taona vitsivitsy ary raha mbola misy fotoana hampiatoana izany vokatra manimba izay mandrahona ny hanafohezana ny fiainana voajanahary eto an-tany. Avy eo hanome hevitra amin'ny antsipiriany bebe kokoa aho ary hanazava aminao izany, inona ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny tany ary ny mety ho vokany eo amin'ny antonony sy maharitra.
1 Ny antony voajanahary amin'ny fiakaran'ny hafanana
1.1 Asa ataon'ny masoandro
1.2 Etona rano
1.3 Tsingerin'ny toetr'andro
2 Ny antony mahatonga ny olombelona hanafoanana ny tany
2.1 Fampitomboana ny entona entona entona
2.2 fandripahana ala
2.3 Mihoatra ny zezika
2.4 Entona metana
3 Inona no vokatry ny fiakaran'ny maripana?
Ny antony voajanahary amin'ny fiakaran'ny hafanana
Raha ny filazan'ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny fiovaovan'ny toetrandro dia mety noho ny antony sasany mahatonga ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany antony voajanahary na antony artifisialy vokatry ny fihetsiky ny olombelona ihany. Raha toa ka antony voajanahary, dia nandray anjara tamin'ny fanafana ny planeta manerantany nandritra ny an'arivony sy an'arivony taona maro. Na izany aza, ireo karazana antony ireo dia tsy dia manandanja loatra amin'ny fitomboan'ny fiovan'ny toetrandro fa ny planeta iray manontolo dia mijaly ankehitriny ary miteraka fandrahonana lehibe ho an'izao tontolo izao izy ireo.
Asa ataon'ny masoandro
Iray amin'ireo antony voajanahary amin'ny fiakaran'ny hafanana zava-dehibe ary izany dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny planeta mihitsy, dia noho ny fitomboan'ny asan'ny masoandro miteraka tsingerina fanafanana mandritra ny fotoana fohy. Mihalehibe sy mihalehibe ny masoandrontsika ary, noho izany, dia miteraka taratra masoandro bebe kokoa mandritra ny hetsika fihanaky ny nokleary. Fantatsika fa ny tara-masoandro manimba dia mihodina noho ny sosona ozone sy ny sahan'andriambin'ny Tany. Na izany aza, mandray anjara amin'ny fiovan'ny toetrandro izy ireo, satria ny ampahany amin'ity taratra ity dia mijanona ao amin'ny atmosfera voatahiry amin'ny endrika hafanana ary mampitombo ny maripana eo amin'ny planeta.
Karazana antony voajanahary iray hafa izay mahatonga ny fiakaran'ny hafanana manerantany ny fitomboan'ny etona rano amin'ny atmosfera izay mitombo ny mari-pana antonony miakatra tsindraindray ary mandray anjara amin'ny fanafanana ny tenany. Ny etona rano dia entona entona afaka mitazona hafanana voajanahary. Izy io dia mandray anjara amin'ny vokatra voajanahary voajanahary ary noho ny etona rano ahafahantsika miaina amin'ireo mari-pana mahafinaritra ireo amin'ny fananganana fiainana.
Ny olana dia rehefa manova ity ampahany amin'ny tsingerin'ny rano ity ny olombelona ka miteraka etona rano betsaka kokoa. Azonao atao ny milaza fa izany no iray amin'ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany izay toa samy tsy voatrolombelona sy voajanahary amin'ny fotoana iray. Arakaraka ny habetsahan'ny zavona etona avy amin'ny habakabaka no mihazona ny hafanana.
Ny antony voajanahary fahatelo amin'ny fiakaran'ny maripana dia noho ilay antsoina hoe tsingerin'ny toetr'andro izay mazàna miampita ny planeta tsy tapaka. Ireo tsingerina ireo dia tsy maintsy atao amin'ny taratry ny masoandro an'ny mpanjaka kintana. Amin'izany fomba izany, raha ny Masoandro no loharanon'ny angovo izay mitondra ny toetrandro eto an-tany, lozika fa misy ny taratra masoandro anjara andraikitra lehibe amin'ny fiovan'ny maripana izay iharan'ny planeta iray manontolo.
Ny antony mahatonga ny olombelona hanafoanana ny tany
Na dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny tany aza ny antony voajanahary, izy ireo no antony mahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny tany ireo izay miteraka fahasimbana betsaka indrindra eto an-tany. Ny ankamaroan'ny antony nataon'olombelona dia vokatry ny fitomboana antsoina hoe gazy entona vokatry ny fihetsiky ny olona. Io vokatry ny entona io dia vokatry ny famoahana ny karbonika ary io no antony lehibe indrindra amin'ny fiakaran'ny maripana ankehitriny. Io karazana emission io dia nanjary a tena loza sy fandrahonana ho an'ny ain'ny planeta ary izany no mahatonga ny ankamaroan'ny manam-pahaizana mitady vahaolana eo noho eo handresy ny vokatra manimba toy izany.
Fampitomboana ny entona entona entona
Ireo famoahana gazy karbonika ireo dia vokatry ny fandoroana lasantsy fosily. SY dia ny famokarana herinaratra sy ny ny gazy izay mampiasa fiara isan'andro eny amin'ny làlan'izao tontolo izao. Rehefa mandeha ny taona ary mitombo ny isan'ny mponina eto an-tany, dia hihamaro hatrany ny hodorana. lasantsy fosily, misy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny fiakaran'ny maripana manerantany, tonga amin'ny fotoana izay avo dia avo ny mari-pana miteraka olana lehibe amin'ny mponina eran-tany.
Tsy maintsy fantatsika ny dinamika avy amin'ny atmosfera ho toy ny zavatra miovaova tsy tapaka noho ny fatran'ny gazy isan-karazany misy amin'ny atmosfera. Ambonin'ny zava-drehetra, miaraka amin'ny CO2, ny fifandanjana dia tsy mitovy foana, satria misy zavamananaina maro izay manao fotosintesis ary mampiasa an'io gazy io mba ho velona.
Ny antony iray hafa namboarin'olombelona ho an'ny fiakaran'ny hafanana dia fandripahana ala amin'ny ankamaroan'ny ala eto an-tany, izay mahatonga ny gazy karbonika hiakatra manerana ny atmosfera. Ny hazo manova CO2 ho lasa oxygen amin'ny alalàn'ny dingana fotosintesis ary tompony fandripahana ala mampihena ny isan'ireo hazo misy afaka manova CO2 ho oxygen. Ny valin'io dia lehibe kokoa Fifantohana CO2 eny amin'ny habakabaka, izay mitarika fiakaran'ny hafanan'ny tany ary noho izany ny fiakaran'ny maripana bebe kokoa.
Ny ala dia mitondra fihenan'ny biodiversité koa noho ny fanaparitahana sy ny fanimbana ny toeram-ponenana voajanahary karazana maro. Ny fitsangatsanganana ala dia tsy mijanona ary antenaina fa amin'ny 2050 ny antsasaky ny ala tropikaly any Amazon dia ho rava.
Mihoatra ny zezika
El be loatra ny zezika amin'ny fambolena no antony iray lehibe mahatonga ny fitomboan'ny fisondrotana be ao ny maripana antonony an'ny planeta. Ireo zezika ireo dia misy haavon'ny azota azota, manimba kokoa noho ny gazy karbonika mihitsy. Rehefa mitombo sy mitombo ny isan'ny mponina dia misy a mitombo ny filàna sakafo, noho izany dia misy ny fitomboan'ny tanimboly ary noho izany, lehibe kokoa fampiasana zezika ao amin'izy ireo.
Ny famokarana sy ny famatsiana sakafo amin'ny sehatra manerantany dia mitaky fijinjana haingana izay voadika amin'ny fampiasana tsy misy fanavakavahana ny zezika, ny herisetra, ny bibikely, ny fungisida ary izay rehetra mifandraika amin'ny fanatsarana ny fitomboana sy ny fivelaran'ny vokatra. Ilaina ny mieritreritra maharitra ary manomboka mihinana vokatra eo an-toerana izay tsy mila zezika marobe ary kely ny entona entona mandritra ny fitaterana.
Ny antony iray farany hijerena ny fiakaran'ny maripana sy ny fiheverana izany dia ny gazy methane. Ity karazana entona ity dia manana andian-tsarin'ny vokatra entona lehibe kokoa noho ny CO2 mihitsy. Ny metana dia novokarina tamin'ny alàlan'ny famoahana ny fanariam-pako ary amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny resaka zezika. Ny zavatra biolojika amin'ny lo sy ny tsy fisian'ny oxygen dia miteraka gazy methane. Io gazy io koa dia mitombo ny fifantohany ary lehibe ny fahefana mitahiry hafanana.
Araka ny hitanao sy nohamarininao dia izany no izy antony maro izany no mahatonga ny fiakaran'ny mari-panan'izao tontolo izao ary mampidi-doza amin'ny tany teny antonony. Na dia ny antony mahatonga ny fiakaran'ny tany aza manana tranga izany Amin'ny fiakaran'ny maripana toy izany dia antony namboarin'olombelona izany hamaha amin'ny fotoana fohy indrindra.
Andro vitsy lasa izay dia azo atao ny manamafy fa ny taona 2015 dia ny mafana indrindra ny tantara rehetra eto amin'ny planeta iray manontolo. Ity zava-misy tena mampiahiahy ity miaraka amin'ny tsy fahita matetika fisehoan-javatra mahatsiravina ny rivo-doza, tadio, na cyclone dia tokony hanala ny fahatsiarovan-tena amin'ny ankamaroan'ny fiarahamonina eran-tany mitady vahaolana haingana araka izay tratra.
Manoloana an'io toe-javatra marefo io, ny governemanta ao fahefana lehibe eto amin'izao tontolo izao tsy maintsy mandray andraikitra haingana ary mamarana ny fiovan'ny toetr'andro ary fihafanan'ny tany fa mijaly isan'andro ny planeta iray manontolo.
Inona avy ireo vokatry ny fiakaran'ny maripana?
Inona no vokatry ny fiakaran'ny maripana?
Ny vokatry ny fiakaran'ny maripanan'ny tany dia misy fiantraikany amin'ny tany manontolo amin'ny lehibe kokoa na ambany kokoa. Ohatra:
Any Espana, ny onjan'ny hafanana dia mihombo matetika, maharitra ary mahery. Raha tsy niverina lavitra loatra tamin'ny fotoana, ny 14 Aogositra 2021, ny tanànan'i Montoro any Montoro dia nandresy ny faran'ny tantara, tamin'ny 47,2ºC, nandritra ny fizarana onja hafanana izay naharitra andro maromaro.
Ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina dia hanery antsika hanova lalana amin'ny teboka maro. Ohatra, mety ho very ny torapasika, tsy lazaina intsony ny fandrahonana ho an'ireo rehetra monina amoron-dranomasina.
Hiova ny tontolo iainana. Ity raha ny tena izy dia zavatra hita: ny zavamaniry mahazaka hafanana sy haintany kokoa dia soloina ireo izay kely kokoa.
Miempo ny glasy, mandray anjara amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.
Ny biby dia lany tamingana haingana. Na dia eto aza isika dia afaka miresaka momba ny fihazana olona ihany koa, misy biby maro, toy ny bera polar, izay manana fahasahiranana bebe kokoa hisambotra ny rembiny, satria mitsonika ny ranomandry alohan'ny fotoany.
Mety ho lafo kokoa ny sakafo. Ny zavamaniry dia miankina amin'ny toetrandro maniry ary mamokatra ihany koa ny voany, ka raha miova ny toe-javatra dia vao mainka sarotra ny mahazo legioma, voamadinika ary / na legioma.
Araka ny hitanao, ny fiakaran'ny marin-tany dia olana lehibe tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ny antony mahatonga ny fiakaran'ny tany
Rolando Escudero Vidal dia hoy izy:
Fangatahana ny tetik'asa fanarenana sy fifandanjana ny fifandanjana ny atmosfera
Rolando Escudero Vidal, mpanoratra
Heveriko fa tonga ny fotoana hiresahana momba ny Pneumoponics. Tonga tampoka ny androko. Tsy tiako izany rehefa vovoka amin'ny rivotra ihany izany, hanenenako ny tsy nilazako azy io, mahita ny olombelona mijaly noho ny vokatry ny fiakaran'ny maripana. Azo antoka fa hisy hiteny hoe vendrana aho. Manan-jo hilaza izay heviny ny tsirairay. Saingy, mahaliana raha asehon'izy ireo amiko fa vendrana aho. Raha izany, tampoka teo dia nahalala zavatra iray aho izay nahatonga ahy hiteny hoe hadalana. Dia afaka misaotra anao akory aho. Saingy, lozisialy ny porofo, manana ny tena fotony.
Inona no atao hoe pnemonia? Ny pneumatika dia fomba iray, rafitra iray misy zavamaniry manome sakafo, izany hoe legioma, misy rivotra mamakivaky ny faka. Azo antsoina koa hoe famoronana izy io. Izay nahazo patanty tao amin'ny INDECOPI, tamin'ny faran'ny taona 2014. Izy io dia rafitra iray izay mampiseho mazava fa ny fakany dia tsy mihinana afa-tsy ny fakany ary ny ravina dia mamoaka ireo gazy vokarina ao anatin'ny zavamaniry fotsiny, vokatry ny fizotry ny simika ao anatiny. Ary ny iray amin'ireo entona ireo, ary ny be indrindra, dia oxygen. Ity fomba ity, ampiharina amin'ny ampahany betsaka, dia afaka mamaha ny fiakaran'ny marin-tany mora foana. Ary, tsy vitan'ny famahana ny olana fotsiny, fa afaka manampy ny olona hifehy ny rivotra iainana, hanatsara ny fambolena, sns. Satria ny legioma dia mampiasa karazany maro ny entona ho sakafo. Angamba ny karazana gazy rehetra amin'ny atmosfera.
Miorina amin'inona io noforonina io? Ity zava-noforonina ity dia mifototra amin'ny Teoria Radicular, notononin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Project of Reconversion and Control of Atmospheric Equilibrium, nosoratan'i Rolando Escudero Vidal. Ity teôria ity dia mifototra amin'ny zava-misy sy zavatra maro azo zahana amin'ny natiora. Ity teôria ity dia milaza fa ny legioma dia omena ny faka fotsiny. Ny ravina dia mamoaka ny entona entin'ny fizotran'ny simika ao anatiny ihany.
Fa ny tanjona fototra amin'ity tetik'asa ity dia ny famahana ny olan'ny atmosfera izay misy fiantraikany amin'ny zanak'olombelona. Noho io antony io, tamin'ny andro voalohan'ny volana martsa dia nampahafantarina tamin'ny fanjakana peroviana izany, tamin'ny famoahana ny famintinana ny La Neumoponia ho an'ny tranom-panjakana, amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblika. Volana amin'ny anaran'ny minisitry ireto minisitera manaraka ireto: Minisiteran'ny tontolo iainana, minisiteran'ny fambolena, minisiteran'ny toekarena, minisiteran'ny raharaham-bahiny, sns. Ho an'ny Kongresin'ny Repoblika ihany koa, tamin'ny anaran'ny filohan'ny Kongresy, Ramatoa Ana María Solórzano, izay, araka ny filazan'i La Primera, dia tsara fanahy tamin'ny fanehoan-kevitra vitsivitsy momba an'io. Nisy volavola ihany koa natolotra ny oniversite Agrarian.
Valiny tamin'i Rolando Escudero Vidal
Ary inona no vokatry ny fiakaran'ny hafanana? Betsaka ary tena matotra. Tokony ho raisina an-tsaina fa misy gazy karbonika marobe miangona ao amin'ny habakabaka. Manana gazy ity gazy ity. Manangona hafanana ny karbaona ary mamindra azy amin'ny manodidina azy, ary raha ny rivotra iainana dia ny tany. Rehefa misy zavatra hafanaina dia mivelatra ary rehefa manitatra dia mihamalemy. Ary amin`ity tranga ity, mihafana ny vovo-tany. Noho izany dia manitatra izy io. Ary raha mihanaka dia mihaosa.
Vokatr'io dingana io dia ny triatra izay miseho amin'ny toerana maro. Iray amin'ireo toerana ireo ny malalako Callejón de Conchucos. Zava-misy izay misy fiatraikany amin'ny tanànan'i Piscobamba, Socosbamba sns. Ary ny vahaolana tokana, indrisy, dia ny miala amin'ilay toerana. Tsy misy hafa. Mety, herintaona sisa no honenana ireto toerana ireto.
Francisco Garcia dia hoy izy:
Manaiky aho fa mety ity ny dingana manaraka ho an'ny hydroponics sy aeroponics, izay tena mahomby amin'ny fomba famokarana fambolena. Izaho manokana dia mino fa ny olombelona dia efa nahatsapa ny fahavoazana izay tsy maintsy "amboarina" amin'ny alàlan'ny fikarohana vahaolana vaovao, tsy manadino fa ny zavamaniry no fiandohan'ny famokarana angovo ao amin'ny biosfera.
misaotra ary hahita anao tsy ho ela
Valiny tamin'i francisco Garcia
Betsaka ny antony mahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, ny olana maro noho ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, olona maro no mety maty, miempo ny bao, mety hisy tondra-drano maro, noho izany dia tsy mieritreritra izay mety hitranga ny olona.
Enrique jr dia hoy izy:
Ny olona dia tsy hoe tsy mieritreritra izy ireo fa tsy manome lanja be loatra izay mety hitranga raha misy ny fahantrana voarara Andriamanitra ary ho tonga saina fotsiny izy ireo fa tsy tokony hanome lanja ny planeta
Mamaly an'i enrique jr
haha marina izany.
Ny azota sy ny oxygen ao anaty rivotra mifandraika amin'ny faritra mafana be (HO AN'NY ENGINES AIRCRAFT ohatra) dia navadika ho oksida nitrous, izay mihetsika ao amin'ny stratosfera miaraka amin'ny ozona, eo ambanin'ny hetsika taratry ny halavan'ny halavany latsaky ny 0,31 micrometers, mitarika ny fihenan'ny sosona ozone.
Nahoana no tsy voatonona mihitsy ireo sidina an-tapitrisany isan-taona? Andriamatoa vola dia tompokolahy matanjaka !.
vendrana be ny olona ka na oviana na oviana nisy tondra-drano noho ny fiakaran'ny maripana dia azoko lazaina fa miala tsiny aho
Ny azo antoka dia ny olana iray na ho ela na ho haingana dia hiantraika amin'ny (maro) antsika rehetra. Raha tsy misy fepetra tena mandaitra hialana amin'izany, mazava ho azy.
Agustin Chavez dia hoy izy:
Ny olana momba ny fiakaran'ny maripana manerantany, maro amintsika no manahy satria misy ny vokany izay misy fiatraikany amin'ny habakabaka, na izany aza tsy manao na inona na inona isika, zava-dehibe ny fiarahamonina, ireo orinasam-panjakana sy tsy miankina, mpandraharaha, andrim-panabeazana ary izay rehetra maniry ny hampiato na hanalefaka ireo olana ireo. izay atrehinay, andao hanomboka ny fampielezan-kevitra izay manentana ny amin'ny fikolokoloana sy fiarovana ny tontolo iainana ary hialana amin'ny valanaretina, aretina ary ny fisian'ny fanovana dioksidan'ny karbôna.
Valiny tamin'i Augustín Chávez
Ivanka dia hoy izy:
Manoro hevitra ny COWSPIRACY fanadihadiana aho hanokatra adihevitra mahaliana momba an'io lohahevitra io, satria araka ny fanadihadiana, ny antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny mari-panan'izao tontolo izao dia ny andraikitry ny biby fiompy, izay tsy misy ifandraisany amin'ny fomba fihinananay. Ary ny antony dia tsotra: ny fihinanana hena dia mitaky fampiasana loharanon-karena lehibe ary raha mijery ny menio fisakafoanana ianao, dia azo atao tsara ny manome ny hena. Ity dia zavatra iray izay tsy fantatsika tanteraka, ary raha te handray anjara na inona na inona, ny ankamaroan'ny OLOMBELOMANANA dia tokony hanova ny fahazaran-dratsin'izy ireo amin'ny zavatra marefo toy ny sakafo, iray amin'ireo endrika mahafinaritra indrindra. Ny famakafakana ny lohahevitra, ivelan'ny taratry ny fanadihadiana izay tena lazaiko dia misy dikany nefa tsy mieritreritra be momba azy. Ity dia lohahevitra marefo sy tsy voakitika, satria toa ny lohan'ny indostrian'ny fiompiana dia manana fitaomana lehibe amin'ny resaka politika manerantany. Fanadihadiana fanadihadiana sarotra sy tsy mahazo aina izany, ary tianay tsy hanana fototra izany, fa raha fintinina, fa ny olana momba ny fiakaran'ny maripana dia misy ifandraisany mivantana amin'ny filàna fanovana ataon'ny tsirairay amin'ny mponina eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fiovan'ny toe-tsaina tsy ny any am-bava ihany fa ny fivoaran'ny fangorahana bebe kokoa amin'ny zavatra rehetra manodidina. Manantena aho fa tianao izany ary manantena izahay fa afaka mahatsapa izany ara-potoana. Tsy azontsika atao ny manohy maneso ny veganism satria fotsiny hoe mahery setra sy manorisory ny sasany, tsy maintsy raisintsika ho fomba fiainana feno fanajana mankany amin'ny tontolo nanome antsika ny zava-drehetra ny safidy voajanahary. Tonga ny fotoana hamerenana zavatra. Salama.
Valiny tamin'i Ivanka
Tokony ho raisina ihany koa fa ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny famongorana ala dia, ankoatry ny fiompiana, zaridaina hanohanana olona an'arivony. Ary tsy maintsy dinihinao ihany koa ireo zezika.
Ny olona no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandotoana ny tontolo iainana, noho io hafanana be io, potehina ny atmosfera ary isika no manimba azy rehefa mampiseho ny ala isika, manapaka hazo, setroka betsaka no manohina antsika, sns.
Mamaly an'i cristhian
Ny fizotran'ny fialan-tsasatra voajanahary dia mijanona, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny manome lalana tsara an'ireo sisa tavela ireo.
Ny fahitana ireo meloka dia tsy mamaha olana fa kosa ny fampiharana ny fomba mety.
Jorge Ventura dia hoy izy:
Nilaza izy ireo fa tsy fantatsika izay ananantsika mandra-pahitantsika azy very, ka hitranga izany rehefa hihoaran'ny planeta ny fandotoana, hatraiza hatraiza ny haitao no hampiasaina raha manao sorona ny tenantsika amin'ny planetantsika izay tsy azo soloina mihoatra ny vola sy teknolojia navelan'ANDRIAMANITRA isika planeta mahasalama toa ny vatantsika raha tsy mitandrina ny vatantsika isika ary isika mihitsy no miteraka aretina tsy azo ovaina amin'ny alàlan'ny fihinanantsika dia tokony hanana fahendrena bebe kokoa momba ny fomba fitondran-tenantsika eo amin'ny fiainana isika dia efa mahalala fa tsy mila manary fako isika ka tsy tokony handoto ny renirano. ary ny ranomasina ary na izany aza dia ataontsika amin'ny fitadiavam-bola fa fantatry ny rehetra ny fihetsik'izy ireo ary tsy maintsy manao ny anjarantsika isika dia ny manao ny tsara
Mamaly an'i jorge ventura
Ny olana rehetra dia azo vahana.
mamaha fa aza miverina
actisal nataon'i rl Atisal dia hoy izy:
Ny tany dia novaina noho ny tsy fitandremana sy ny tsy fahampian'ny fahalalàna be loatra amin'ny fandinihana ny fotoana, ny tsy fisian'ny fanodikodinam-bolo mba hisorohana ny fahasimban'ny rafitra any an-danitra, tokony hijery etsy ambony ianao raha hijery ireo fanehoan-kevitra etsy ambany, mitandrina, miakatra ambony ary miakatra hahita bebe kokoa etsy ambany
Valiny ho an'ny actisal avy amin'i rl Atisal
Ahoana ny fongan'ny CO2
Mazava fa simba ny CO2 rehefa hafanaina ny arina. Ny tondro mazava an'ity zava-misy ity dia tranga roa mitranga amin'ny natiora: rehefa tonga ny lohataona dia milatsaka ny orana. Rehefa tonga ny fahavaratra dia miakatra ny orana, avy ny orana. Fa maninona no izao? Ny mitranga dia amin'ny lohataona ny taratry ny masoandro dia mbola ao amin'ny toerana izay mbola tsy azon'izy ireo hafanana be. Etsy ankilany, amin'ny fahavaratra dia tonga mahitsy amin'ny atmosfera ireo taratra ireo ary manafana be. Ity dia porofo fa mihasimba ny CO2 amin'ny fanafanana, ny famoahana oksizenina. Avy eo ny oxygen dia miditra amin'ny hidrogen, be dia be amin'ny atmosfera, mamorona rano, H2O. Ary avy eo ny orana.
Huaycoloro dia toerana iray any amin'ny faritanin'i Huarochirí. Raha avy amin'ny anarana Kech-huas roa ny anarany: huay-ghó sy loj-ro, toerana mety hampidi-doza io. Ny huay-ghó dia karazan-bibilava kely sy manify, 30 santimetatra eo ho eo ny halavany ary mihoatra ny 4 milimetatra ny hateviny. Mihetsiketsika amin'ny tany ny fivezivezeny. Mipetraka ambanin'ny tany izy io. Azo zaraina roa izy io ary ny andaniny roa dia mbola velona. Samy mandeha amin'ny làlan-kalehany avy ny tsirairay ary tonga eo ambanin'ny tany onenany.
Huayco dia avy amin'ny anaran'ny bibilava ity, noho izany, ny fananany dia mitovy amin'ny an'ny bibilava kely. Satria ny mponina taloha amin'ireto toerana ireto dia nanome anarana toerana araka ny zavatra hitany. Ary ny huayco dia mihetsika amin'ny fomba miovaova, toy ny bibilava kely, ary raha mizara dia manohy mivezivezy.
Ary izay milaza fa "boloky" dia niavian'ny anarana hoe "loj-ro" izay anarana Kech-hua amin'ny sakafo iray izay toy ny lasopy, nefa matevina, mifangaro zavatra maro: legioma, ovy, tsaramaso, hena, sns. . Ny huayco rehefa tonga amin'ny toerana azo sakanana dia manangona mamorona zavatra mitovy amin'ilay sakafo voalaza etsy ambony. Avy amin'izany no teraka ny anarana Huaycoloro.
john jhair dia hoy izy:
Raha mandalo ny taratra ultra violet dia hodorantsika mandra-pahafatintsika
Mamaly an'i juan jhair
Gino Gallo dia hoy izy:
Mampalahelo tokoa rehefa afaka taona vitsivitsy dia ho faty may isika, raha tsy manao na inona na inona isika dia tokony hampahafantatra ny olona tsy hiasa amin'ny orinasa intsony. Miezaha manampy ny tontolo iainana. Azafady ry namana, andramo ajanona izany alohan'ny tara loatra. Hodio indray ireo hazo ary afaka manitatra ny aintsika isika ny olombelona Mba ampio aho help
Valio i Gino Gallo
tsy maintsy misoroka an'io ianao
Ny antony mahatonga ny fiakaran'ny maripana dia mety ho maro. Fa misy fomba iray afaka mamaha ny olana; ny Tetikasa ho an'ny famerenana ny laoniny sy ny fibaikoana ny atin'ny atmosfera na ny pnemoponics.
fampahalalana tena tsara
donnais sebastian herrera medina dia hoy izy:
Ny fiainana eto ambonin'ny planeta dia tena tsara tarehy raha manimba azy isika alohan'ny hahatongavan'ny zanany, inona no tontolo avelan'izy ireo hanana izany, tsy afaka izany, isika rehetra dia tsy maintsy miatrika fanoherana ny fifanolanana, hoy isika rehetra, olombelona isika fa tsy biby, andao hikarakara an'izao tontolo izao, hey na ny biby aza mikarakara azy ireo
Mamaly an'i donais sebastian herrera medina
MATIO-YT dia hoy izy:
Valio amin'i MATTHEW-YT
Lucia Paredes dia hoy izy:
mitsahatra tsy mandainga ny olona ary mihaino siansa.
Valiny tamin'i Lucía Paredes
Moisés Ugido Cedeño dia hoy izy:
Ny antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny tany dia ny biby fiompy, ny entona metana avy amin'ny omby, miaraka amin'ny stiercol sy ny aretin-ketotra, mandoto betsaka noho ny CO2 novokarin'ny zanak'olombelona rehetra, ny fandripahana ala indrindra ilaina amin'ny kijana izay mila toerana sy loharanon-karena be, mamokatra kely dia kely ...
Te-hanampy amin'ny fisorohana ny hafanan'ny tany ve ianao? Aza mihinan-kena.
Manoro hevitra anao ihany koa aho ny hijery ilay valin'ny fanadihadiana momba ny omby izay hazavaina tsara
Valiny tamin'i Moisés Ugido Cedeño
Alberto compagnucci dia hoy izy:
Mihoatra ny fanaovana hevitra, te-hamorona fangatahana aho. Ankoatry ny antony voatanisa ho fiakaran'ny mari-pana manerantany, azo atao ve ny miditra amin'ny tsingerin'ny toetrandro izay tsy ananantsika firesahana tantara? Ny fivezivezan'ny tany no resahiko, izay misy tsingerina maharitra 25.000 taona eo ho eo ary mazava ho azy, noho ny faharetan'izany, tsy manana referansa sy toetr'andro kely kokoa isika. Miorina amin'ny reko dia manodidina ny 12.000 taona eo ho eo isika amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry ary mifanindran-dalana izany, mifanandrify amin'ny faharetan'ny antsasaky ny fizarana. Mety ho any amin'ny fotoana izay tsy ananantsika firesahana ve ity? Mifanindran-dàlana dia mifanaraka ny mieritreritra fa, ny fahafantarana fa ny fihodinan'ny Tany manodidina ny masoandro dia ellipse, ny fampisehoana dia miteraka fanovana ny elanelana misy eo anelanelan'ny ifotoran'io ellipse io ary noho izany ny fanovana azy ary hita taratra izany, na dia fa tsy ampahany, amin'ny fiovan'ny toetr'andro hita?
Valiny tamin'i Alberto Compagnucci
diego saavedra gonzalez dia hoy izy:
Eny, nanampy betsaka ahy izany, misaotra, fa misy kosa ny fikarohana milaza fa angano ny fanamorana ny tany ary efa in-3 no nisehoan'io, ka ny tadiaviko dia raha marina izany?
Mamaly an'i diego saavedra gonzalez
Noemi dia hoy izy:
Ahoana no fomba hampiasako an'ity fampahalalana ity amin'ny asako na amin'ny thesis raha tsy misy mpanoratra na oniversite iray farafaharatsiny izay manohana ny fahalalana zaraina, manelingelina ahy amin'ny pejin-tranonkala izany, aiza ny referansa na tranokalan'ny olona nanao fikarohana na asa an-tsaha, plagiarism tanteraka.
Valiny tamin'i Naomy
Malena dia hoy izy:
Heveriko fa tsy maintsy mamonjy an'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fampijanonana izany rehetra izany
Valiny tamin'i Malena
alex gonzales herrera dia hoy izy:
Tsy mety izany, napetrako tamin'ny endrika lisitra iray izany satria antony ratsy ihany.
Valiny tamin'i Alex Gonzales Herrera
Camila Bear dia hoy izy:
Toa tsy ilaina ny milaza ao amin'ilay fanamarihana fa iray amin'ireo tompon'andraikitra lehibe indrindra dia ny indostrian'ny fiompiana izay miteraka fitrandrahana entona maintso betsaka indrindra, mihoatra ny fandoroana ireo solika fôsily. Ireo etona ampiasain'ny biby fiompy dia izany no miteraka gazy entona ary raha atambatra amin'ny ala io mba hambolena sakafo ho an'ny biby fiompy, dia hihabetsaka ny vokatry ny fiakaran'ny hafanana.
Valiny amin'i Camila Osa